IPhone Security | Vaovao IPhone
iOS dia fantatra fa iray amin'ireo rafitra miasa finday be indrindra fiantohana misy izany, fa indraindray ny mpijirika mahita lavaka fiarovana izay ampiasaina amin'ny famoahana jailbreak indraindray na fampidirana malware amin'ny fotoana hafa; ny ankamaroan'ireo olana ara-piarovana ireo dia nakaton'ny Apple miaraka aminy fanavaozana iOS. Ary ny App Store dia mora tohina amin'ny fandikana fiarovana amin'ny endrika Spam na Pishing. Hiatrika ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fitrandrahana isika, jailbreak ary ny olana azo avy amin'ny tsy fahampiana fiarovana amin'ny iOS.
ny Toni Cortés hace Andro 3 .
Soa ihany androany ny orinasan-telefaona dia manana tolo-tahiry lehibe ho an'ireo mpampiasa azy. Efa…
Ary io dia ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ho an'i Apple dia lafiny iray tena lehibe amin'ny politikany amin'ny fampiasana ...
Ny iray amin'ireo safidy ananantsika amin'ny iOS dia ny fanitsiana ny habetsaky ny fonenantsika (na ...
ny Toni Cortés hace 8 volana .
Raha tsy maintsy nofaritako izay misolo tena ahy ny Apple App Store amin'ny teny tokana tsy misy toerana ...
ny Toni Cortés hace 10 volana .
Toa zavatra avy ao amin'ny laboratoara gadget James Bond io, saingy tsia, tena izy io. Patent vaovao izay mifarana ...
Amin'ny fahavaratra izao ary mety noho ny COVID-19 dia mikasa ny hanao dia lavitra miaraka amin'ny fiaranao ianao, ...
Ny faharefoana farany amin'ny iPhone izay mety hametraka ny data-nao ho tandindonin-doza ary ahafahan'ny hackers mahazo ...
Isika rehetra dia mampifandray ilay teny hoe mpijirika amin'ny sary fonony, olona ratsy toetra, miakanjo mainty, izay mampiasa ny fahalalany ...
Trump tsy mijanona amin'ny fahavononany hanana fifehezana tanteraka amin'ny sehatra rehetra amin'ny fireneny. Ary manana…
ny Vaovao IPhone hace Taona 1 .
Mahatakatra ny fiainana manokana izahay amin'ny fahafahantsika tsirairay mifehy ny mombamomba antsika, ny angona na ny fisie. Ary ny fifehezana izany dia midika ...
Toa lasa lamaody ny fiarovana lafin-javatra roa. Andro vitsy lasa izay dia tsy maintsy namboariko ...